Sary Gasypatriote Toamasina
Niezaka ny nanavotra ny fananany ihany ireo fokonolona saingy misy an'ireo entana mba tafavoaka indray no misy mangalatra. Niezaka nanara-maso izany ihany ireo mpitandro ny filaminana saingy noho ny fahamaroan’ireo olona dia tsy hay intsony ny tompon’ny entana sy ireto mpangalatra.
Nahitana fahatarana 30min ihany koa ny fahatongavan’ny fiara mpamonjy voina ny kaominina, izay mbola sahirana koa nitady lalana nidirana ilay faritra nisy ny trano may noho fahateren’ny lalam-pasika tao amin’ity fokontany ity.
Adin’ny telo taty aorian’ny niandohany vao voafehy ny afo raha nanampy ny fiara mpamonjy voina sy hain-trano ny kaominina ireo fiara mpamonjy voina sy haintrano an’ny seranan-tsambon’i Toamasina, sy an’ny orinasa Ambatovy, ary an’ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy.
Betsaka ny vaovao mifamahofao azo amin'ny anton’ny nahatonga ny fahamaizana goavam-be tao Tanambao V izao, saingy ny fanadiadiana, izay voalaza fa efa mandeha amin’izao ihany, no hahalalana ny marina mikasika izany.
Manao antso avo koa anefa ny sampana mpamonjy voina sy haintrano ny kaominina amin’ny fanokafan’ny olona ireo lalam-pasika eto Toamasina, hisorohana ny fahaterena ka mahatara ny asam-pamonjena tokony ataon’izy ireo.